Izinto ezi-4 ezibalulekileyo ekufuneka ziqwalaselwe Phambi kokuba uthenge iibhokisi zeMveliso yeSinyithi zeGadi yakho- iBhlog yeNdawo ethengisa izindlu nomhlaba:
Izinto ezi-4 ezibalulekileyo ekufuneka ziqwalaselwe Phambi kokuba uthenge iibhokisi zeMveliso yeSinyithi zeGadi yakho
EyeNkanga 27, 2019 by U-Evan Javier, Iimbono zizonke:
Ibhokisi yomatshini yokutyala ingachazwa njengenye yezona zinto zikhethwayo xa kusenziwa igadi kwaye iguqule indlela yokulungisa igadi. Imvelaphi yebhokisi yokutyala isusela kwixesha lakudala apho uluntu lwaqala ukusebenzisa iibhedi eziphakanyisiweyo zokulima. Kule mihla abantu banokufumana izixhobo ezahlukeneyo zebhokisi yokutyala kwaye abantu abaninzi bathanda ukuzisebenzisa iibhokisi zentsimbi zokutyala igadi.
Ibinzana elithi 'ukulima igadi' lidume kakhulu kwiminyaka yakutshanje kwaye imeko inokubonwa ezidolophini kunakwimimandla engaphantsi. Kwimeko xa uzimisele ukutyala imali kwiibhokisi zentsimbi, kufuneka uqwalasele imiba eliqela kwaye inqaku liza kubalaselisa okufanayo.
1. Cinga ngobungakanani
Ukuba ucwangcisa ukutyala imali yakho kwiibhokisi zentsimbi, kufuneka uthathele ingqalelo izinto ezifana nobungakanani begadi kunye nemilinganiselo yayo. Ubungakanani begadi bunokuhluka ukusuka kwindlu ngendlu okanye indawo ukuya kwenye kwaye ngenxa yoko kubalulekile ukuba nombono malunga nobungakanani obufunekayo yebhokisi yokutyala.
Ukuba ibhokisi izakusetyenziselwa izityalo ezimbalwa kuphela onokukhetha isayizi encinci, kodwa ukuba ucinga ukutyala amakhulukhulu ezityalo kwigadi yakho eyandisiweyo, kusoloko kungcono ukukhetha ibhokisi enkulu yokutyala igadi egadini . Ibhokisi enkulu yokutyala ivumela indawo enkulu yokukhula kweengcambu kwaye iya kunceda izityalo ngeendlela ezahlukeneyo.
Abantu banokuza neentlobo ngeentlobo zeebhokisi zokutyala zesinyithi kwaye kunokuba yinto edidayo ukubaninimzi ukuba bakhethe imveliso efanelekileyo yegadi yabo. Kule mihla ibhokisi yokutyala yenziwa ngezinto ezahlukeneyo kwaye uyilo lungahluka kwimveliso ukuya kwimveliso r. Sicebisa abafundi ukuba bajonge uyilo olwahlukeneyo kwi-Intanethi kwaye kuya kuba luncedo kakhulu ukufumana uyilo olufanelekileyo ngokhetho olukhethekileyo.
Akukho mathandabuzo ukuba iibhokisi zokutyala zentsimbi ngokuqinisekileyo ziya kuphucula ukubukeka kwendlu yakho.
Ukuqina yinto ebalulekileyo ekufuneka ujonge kuyo ngaphambi kokutyala imali kwiibhokisi zentsimbi. Abantu kufuneka bakhethe ibhokisi yokutyala yentsimbi ngobunono njengoko ithanda ukuba nzima ngakumbi xa ithelekiswa nezinye izinto. Iibhokisi zokutyala zesinyithi zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala ziyinto enzima kubasebenzisi. Ngokuchasene noko, iibhokisi zokutyala zentsimbi ezenziwe ngealuminiyam zilula kwaye abantu abayi kukhathazeka malunga nokugqwala ngaxeshanye.
Nangona ibhokisi yokutyala ye-aluminium ibiza ngaphezulu kwebhokisi yokutyala i-iron, yomelele ngakumbi xa kuthelekiswa nentsimbi kwaye ke iya kuba sisigqibo sobulumko sokutyala imali kwibhokisi yokutyala ye-aluminium. Kule mihla abantu banokufumana ibhokisi yokutyala eyenziwe ngentsimbi engafakwanga i-zinc, i-zinc, ubhedu okanye ikhokelela kwaye abantu banokukhetha ngokweemfuno zabo.
4. Ulungiso lwamanzi
Isidingo sokunkcenkceshela sinokuhluka ngokuxhomekeka kwisityalo esisetyenzisiweyo kwaye abalimi kufuneka baqwalasele amajelo okuhambisa amanzi ngaphambi kokwenza isigqibo sokugqibela. Abathengi kufuneka bajonge ukuba ngaba iimveliso ziza kunye nomngxunya wokuntywila ukuze amanzi agalelwa kuwo angcwabe ngokukhawuleza. Imihombiso yokuhombisa ilungile kodwa ezo azilungelanga igadi. Cinga ngenjongo yokuthenga iimveliso ezinjalo kwaye kuya kuba lula ukukhetha iibhokisi zokutyala ezifanelekileyo zentsimbi.
Uninzi lwabantu lubonisa umdla wokuthenga iibhokisi zentsimbi kwaye siyathemba ukuba abafundi sele benoluvo lwezinto ezibaluleke kakhulu ezifuna ukutshekishwa xa uthenga. Siyathemba ukuba izikhokelo ziya kuba luncedo kubalimi kwaye abantu banokusibhalela sibuyele babelane ngamacebiso amaninzi ngokufanayo.
U-Evan Javier Novemba 27, 2019
Olu ngeno yafakwa kwi Yard kunye neGadi noqhotyosho iibhokisi zentsimbi, iibhokisi zokutyala. Bookmark le Permalink.
Ngamana 25, 2017 Izizathu zokuqesha umhlaba ocekeceke kwimihlaba Ukugcina ingaphandle lendlu yakho kubandakanya iinkcukacha ezinkulu zokuqinisekisa ukuba i-lawn yakho ifumana yonke ingqalelo eyifunayo ukuze igcinwe ikwimeko entle. Ukulungiswa kwembonakalo yomhlaba wakho akukho msebenzi olula njengoko unokubonakala ngakumbi ngaphandle kwamava aneleyo kunye neengcebiso zokuzisebenzisa. Ukwenza isigqibo sokukhathalela imbonakalo yomhlaba wakho ngaphandle koncedo lobuchwephesha kunokukuchithela ixesha elininzi kunye nemali ukwenza ulondolozo lwegadi yakho ngamava ongakuthandi ukubandakanyeka […] exhonyiweyo Yard kunye neGadi
Agasti 14, 2018 IINDLELA ZOKUGQIBELA EBALULEKILEYO UNGASEBENZISA UKUZE UQEQESE IKHadi lakho Abantu abaninzi kwihlabathi liphela namhlanje banomdla owahlukileyo ebomini. Umdla onjalo unokunqumla kwimidla eliqela enjengomculo, ukubhaka kunye nokupheka. Nangona kunjalo, igadi ibisoloko ikho ukususela ekuqaleni kwexesha. Ingathathelwa ingqalelo njengendawo yokuzonwabisa yasebukhosini enanditshwa ngabantu abaninzi abathandanayo nendalo. Nangona kunjalo, njengayo yonke into esemhlabeni ayikaze ihlale injalo kodwa inamandla kwindalo, isenzo sokwenza igadi sitshintshile kunye namaxesha kunye nexesha. Oku […] exhonyiweyo Yard kunye neGadi
Juni 9, 2017 Iindlela ezi-7 zokwakha igadi yakho yegumbi Ukuba kukho umntu othetha ngokukhulisa imifuno yabo kwigumbi labo, banokuvakala ngathi akukho ngqiqweni kuwe kodwa zininzi iindlela zokukhulisa igadi yakho eflethini yakho. Ukulungiswa kwegumbi kwigumbi kunokuvakala njengengcinga yangaphandle kodwa kusenokwenzeka njengoko kukho iindlela ezininzi zokukhulisa igadi yakho eflethini nokuba incinci kangakanani. Ezona ndlela zi 7 zixhaphakileyo zokukhulisa amayeza akho, iintyatyambo, kunye nemifuno kwigumbi lakho yile ilandelayo: 1. Ungazikhathazi ngeSithuba- […] exhonyiweyo Yard kunye neGadi
January 25, 2017 Ukuhanjiswa kweendlela zegadi akufanelanga uphoswe ngo-2017 Uyilo lwegadi sele luthanda kakhulu mva nje kwaye unyaka nonyaka lubeka into entsha kwindawo ebonakalayo. Ukuba usikelelekile ngokuba nesitiya, ngokuqinisekileyo uyazi ukuba kuthatha ixesha elingakanani ukugcina ubume obubonakalayo. Ukuthathela ingqalelo zonke iinzame ezifunekayo, kuya kuba lihlazo ukungathathi ithuba kwaye kubonakale kukuhle kwaye kuthambekele kwixesha ngalinye elitsha elizayo. Ukuze wenze njalo kulo nyaka, nantsi uyilo lwakamyezo lwamva nje […] exhonyiweyo Yard kunye neGadi
Aprili 11, 2019 Nobuhle emva kwendlu yakho eneempawu zendalo Ilitye lendalo lidume ngobuhle bayo kunye nokungaphelelwa lixesha. Ingasetyenziselwa ukufezekisa i-aesthetic yeklasikhi, ukujonga ngamehlo, okanye ukuchukumisa kobunewunewu. Isiphumo esifezekisiweyo sixhomekeke kakhulu kudidi lwelitye elisetyenzisiweyo kunye nobungakanani bokubekwa kwayo, kuchazwe, kwaye kwagqitywa. Yinto enemisebenzi engathethekiyo enokufakwa kumhlaba wokuma komhlaba nangayiphi na kwezi ndlela zilandelayo: Indlela ye-Quaint Path engasetyenziswanga ukusebenzisa amatye […] exhonyiweyo Yard kunye neGadi
Oktobha 13, 2016 Iindlela ezi-5 zobuchule bokuba nesitiya kwi-Condo yakho Ngelishwa, uninzi lweekhondomini ezifana neSedona Parc zinendawo encinci yokufaka izinto ezithile njengomyezo. Oku akuthethi ukubingelela uthando lwakho lwendalo, nangona kunjalo. Ungasoloko ubeka eyakho shrubbery ngaphakathi kweyunithi yeCoo. Umgangatho womgaqo we-condo mawungaze uphathwe njengobunzima. Endaweni yoko, yandisa ithuba elinikiweyo lokufumana ithuba lakho ngezi ngcinga zilungileyo zegadi. 1) Ukulima izitiya umxholo odumileyo phakathi kwamakhaya […] exhonyiweyo Yard kunye neGadi
Juni 20, 2016 Izizathu ezi-5 zokuSusa amaTyholo aGulayo Ukuqhuba ujikeleza ebumelwaneni, unokuphawula inani elothusayo lemithi egulayo egxunyekwe kwiiyadi ezingaphambili. Uninzi luphawuleka ngamasebe angenanto, kodwa ezinye izifo zomthi kunzima ukuzifumana kukude. Ukuba umthi awunikezeli kugula okubonakalayo, unokungaqapheli ukuba akukho nto iphosakeleyo. Ukuba awuphononongi rhoqo imithi yakho, inokuthatha iminyaka ngaphambi kokuba inyani iqale; njengoko ixesha lihamba kwaye umthi usiba brittle, akunakuphepheka. Leyo […] exhonyiweyo Yard kunye neGadi
January 2, 2018 Iingcamango ezi-8 zeMiyezo yokuhlobisa uNyaka oNyaka oMtsha Ubusuku boNyaka oMtsha buyeza, kwaye lixesha lokuphinda wenze igadi yakho ezinye iimbono ezintsha nezintle! Awunayo enye? Akukho sidingo sokukhathazeka, iikhonsepthi zethu zingasetyenziselwa kwiingcingo, kwi-balcony, okanye kwindawo encinci kwigumbi lakho. Ezi zisibhozo zeembonakalo zezityalo zibanda kakhulu kubathandi be-DIY zinokwenziwa ngokulula. Iingcamango zilula, izixhobo kunye nezixhobo zingabizi kwaye kulula ukufumana. Ezi ngcebiso zilula kodwa zilungile kwaye zintle !. Zama ukubeka amathini asetyenzisiweyo weAluminiyam endaweni yakho ezi […] exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya, Yard kunye neGadi